Vaovao momba ny Oukitel: telefaona, hevitra, famoahana ary maro hafa - Androidsis | Androidsis
Mahita marika finday marobe amin'ny Android isika izao. Ny iray amin'ireo marika vao haingana indrindra izay hitantsika matetika hatrany eny an-tsena dia Oukitel. Anarana iray izay manomboka mahazo laza, na dia orinasa vao tsy ela akory aza.
Oukitel dia natsangana tamin'ny taona 2007 tao amin'ny tanànan'ny Shenzhen any Sina. Ity tanàna ity dia azo faritana ho renivohitry ny teknolojia ao amin'ny firenena, fonenan'ireo orinasa marobe ao amin'ilay faritra. Tany amin'ny taona 2008 vao nanomboka nahavoa ireo fivarotana ireo finday voalohany an'ny marika. Tamin'ny taona 2009 dia niaina ampahany tamin'ny fanitarana iraisampirenena izy ireo tamin'ny fanokafana ny orinasa lehibe tao Shina.Hatramin'izay, Oukitel dia nanao zana-kazo eo amin'ny tsenan'ny Android.
Ny tsena lehibe indrindra dia ny Aziatika, miaraka amin'ireo firenena toa an'i Shina na Korea. Fa nandritra ny fotoana ela dia mora ny nividy finday avy tany Eropa. Oukitel dia mandefa modely miaraka amin'ny vidiny mihena nefa miaraka amin'ny famaritana tsara. Matetika izy io dia mifantoka amin'ny elanelam-potoana sy ny sakany fidirana. Izy ireo koa dia mazàna miavaka amin'ny batterie lehibe ananany.
Oukitel WP15: famaritana, vidiny ary misy
ny Ignacio Sala hace 1 volana .
Tonga ny vanim-potoana 5G, saingy misy zavatra tsara kokoa noho ny manana 5G amin'ny findaintsika? Eny, miankina amin'ny ...
WP15 no smartphone vaovao an'i Oukitel miaraka amin'ny bateria 15.600 mAh
Ny bateria dia mijanona ho iray amin'ireo aretin'andoha lehibe indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mpanamboatra sy mpampiasa….
Ny Oukitel WP6 vaovao dia amidy amin'ny 20 martsa ho avy izao
ny Ignacio Sala hace 2 taona .
Rehefa mividy smartphone vaovao dia tsy tokony hiorina amin'ny vidiny fotsiny isika, na dia matetika aza no ...
Ny OUKITEL C17 Pro dia azo vidiana izao $ 84,99
ny Eder Ferreño hace 2 taona .
Andro vitsy lasa izay dia efa nilaza taminay izahay fa ny OUKITEL C17 Pro dia havoaka vonjimaika amin'ny vidiny tsara indrindra. A…
Jereo hoe ahoana no ahazoana ny OUKITEL C17 Pro
Herinandro lasa izay dia nihaona tamin'ny fomba ofisialy ny OUKITEL C17 Pro izahay. Modely vaovao amin'ny marika sinoa, izay ...
OUKITEL C17 Pro, talanjona amin'ny fakantsary telo misy azy
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace 2 taona .
Misy lahatsoratra maromaro natokanay ho an'ny smartphone OUKITEL. Amin'ny ampahany betsaka satria amin'ny ...
Tehirizo ny Oukitel Y4800 vaovao amin'ny $ 199 fotsiny
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, dia niresaka imbetsaka momba ny terminal manaraka izay hatombok'ilay orinasa aziatika Oukitel eny an-tsena isika, ...
Ilay OUKITEL Y4800 vaovao, 48 Mpx ary maro hafa
Ny fanolorana finday avo lenta amin'ny finday Android dia mitombo tsy azo fehezina. Ary hitantsika ny vokany isaky ny ...
Toy izao no ahafahan'ny Oukitel Young Y4800 mamela antsika hanao endrika mitovy
Niresaka momba ny fandefasana Oukitel manaraka izahay nandritra ny herinandro maromaro. Miresaka momba ny Young Y4800 izahay, terminal iray natao ho ...
Oukitel dia manolotra ny C15 Pro +, kinova vitaminina an'ny C15 Pro
Ny tontolon'ny telefaona dia tsy vitan'ny terminal avo lenta, na dia izy ireo aza no maodely izay ...
Oukitel Y4800 vs Xiaomi Redmi Note 7: fitsapana fampisehoana
Rehefa manavao ny terminal taloha misy antsika dia tsy maintsy jerentsika ny andian-dahatsoratra ahafahana manapa-kevitra, tsia ...
Fanasongadinana ny sokajy
OUKITEL U18 Famerenana
OUKITEL K6, ny fitsiriritana ny eo afovoany
Avereno jerena ny Oukitel K3, ilay Android miaraka amin'ny bateria 6000 mAh lehibe
Lahatsoratra teo aloha